NC Leveler Feeder,China NC Leveler Feeder Supplier & Manufacturer
Nkọwa:NC leveler inye nri, 3 n'ime 1 Straightener Feeders, Onye na-eri ihe na-ebugharị oche,Ikpochapu ahiri,Feeding na enye nri dika nri,Press Press NC Leveler Feede
Home > Ngwaahịa > Nri Cost Straightener > NC Leveler Feeder
Ngwaahịa nke NC Leveler Feeder , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, NC leveler inye nri , 3 n'ime 1 Straightener Feeders suppliers / factory, wholesale high-quality products of Onye na-eri ihe na-ebugharị oche R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
3 na 1 feederser feeder  Kpọtụrụ ugbu a
NC Servo Straightener na-enye nri Maka ulo oru ugbo ala  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enye ihe mkpuchi eriri maka eriri ọkụ Stamping  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-eri nri Servo  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye nri nke Mbido akpaaka maka akwụkwọ akụkọ  Kpọtụrụ ugbu a
NC Leveler Feeder Maka Ngw’oru eji akpo ulo  Kpọtụrụ ugbu a
Straightener na ndị na-enye nri Maka ihe igwe  Kpọtụrụ ugbu a
Uncoiler Leveler Feeder maka eriri eriri na - ejigide eriri oche  Kpọtụrụ ugbu a
Cost ibe nri akara  Kpọtụrụ ugbu a
NC Feeder Straightener & Uncoiler 3 n'ime 1  Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler Cum Straightener & Servo Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Idozi Ndozi na Nchikota  Kpọtụrụ ugbu a
Pịa onye na-enye nri  Kpọtụrụ ugbu a
Punching Press 3 Na 1 Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Ike Press NC Servo 3 Na 1 Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
3 Na 1 Stantener Feeder na Decoiler  Kpọtụrụ ugbu a
Feeder Metal Uncoiler na-enye nri  Kpọtụrụ ugbu a
3 Na 1 Straightener & Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
CNC Straightener Feeder Uncoiler Servo 3 na 1  Kpọtụrụ ugbu a
Automatic Press Line  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwaọrụ Servo Feeder uncoiler leveler  Kpọtụrụ ugbu a
3 na 1 feederser feeder
3 NA 1 STRAI GHTENER FEEDERS Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed,...
NC Servo Straightener na-enye nri Maka ulo oru ugbo ala
NC SE RVO STRAI GHTENER FE EDERS F MA KWES IRUT UTBỌ EGO Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị...
Onye na-enye ihe mkpuchi eriri maka eriri ọkụ Stamping
CO IL STRAIGHTENER FEED ER FOR PRES MPA LINE Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat...
Onye na-eri nri Servo
SERVO STRA IGHTENER FEE DER & DE COILER Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat...
Ngwunye nri nke Mbido akpaaka maka akwụkwọ akụkọ
Akpaaka PRECI Zaion udia SY ị ga IHE ígwè obibi Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat...
NC Leveler Feeder Maka Ngw’oru eji akpo ulo
NC LEVELER FE EDER maka Hlọ APPL IANCES STAMPING Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka...
Straightener na ndị na-enye nri Maka ihe igwe
STRAIGHTENER A NA-AKWEDKWỌ MAKA MAKA ETAL Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil...
Uncoiler Leveler Feeder maka eriri eriri na - ejigide eriri oche
UNCOILER LEVEL ER FEEDER SEA T BELT BUCKLE STAMPING Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka...
Cost ibe nri akara
COIL STR IPS FEED LINE Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed, decoener, na...
NC Feeder Straightener & Uncoiler 3 n'ime 1
NC FEED ER STRAIGHTENER & UNCOI LER 3 NA 1 Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat...
DECO ILER CU M STRAIG HTENER & SE RVO FEEDER Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka...
Idozi Ndozi na Nchikota
AKWCOKW STR STRR STR AIB STRR AND IME GHTENING NA BLA NKING LINE Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na -...
Pịa onye na-enye nri
PR ESS STRAIGHTENER F EEDER Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed,...
Punching Press 3 Na 1 Feeder
UNBỌCH PR IME 3 NA 1 Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed, decoener, na -...
Ike Press NC Servo 3 Na 1 Feeder
IWU PR ESS NC SER VO 3 NA 1 FE FEER Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed,...
3 Na 1 Stantener Feeder na Decoiler
3 NA 1 STRAI GHTENER FEED ER WITH DE COILER Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat...
Feeder Metal Uncoiler na-enye nri
Warara ME Tal UNCO ILER feeder Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed,...
3 Na 1 Straightener & Feeder
3 NA ENWETA HTENER & FEEDER Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed,...
CNC Straightener Feeder Uncoiler Servo 3 na 1
CNC STRAIGH TENER FEE DER UNCOI LER SERVO 3 NA 1 Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka...
AUTOMA TIC PRE SS LINE Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed, decoener, na...
Ngwaọrụ Servo Feeder uncoiler leveler
SERVO FEE DER UNCO ILER LEV ELER MACHINE Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil...
China NC Leveler Feeder Ngwa
NC leveler feeder machine bụ otu ụdị igwe ihe eji arụ ọrụ, a na - eji ya emeghe ma na-achikota igwe mkpuchi na inye ya nri igwe, igwe na - akpụ igwe, CNC lathe machine, igwe na - akpụ ya.
NC leveler feeder abụghị naanị ngwakọta dị mfe nke uncoiler, straightener, na feeder kamakwa njikwa ike dị ukwuu na arụmọrụ. Ogige hydraulic, ụgbọ coil, uncoiling moto, spindle na inverter, akụkụ kwụ ọtọ, servo feeder motor jikọtara ya na sistemụ modulu nke PLC ma nwee otu ihu mmetụ na-achịkwa, nke dị mma maka ndị ọrụ.
Ọ nwere ike ijikwa akwa nchara na kwa igwe anaghị adị na oke ọkpụrụkpụ. Ọ nwere ike ijikwa ọkpụrụkpụ nchara ruo 12.0mm mkpuchi obosara ruo 1800mm na arụmọrụ dị elu na-arụ ọrụ dị elu. A kọlụm ihe eji achọ ihe eji achọ ihe eji arụ ọrụ dị mkpa maka ike dị elu nchara nchara n'ụgbọala, ihe nrụpụta, ikuku ma ọ bụ n'ichepụta ngwa ọrụ eletriki.
NC leveler feeder dị mfe ịwụnye, nke nwere ike ịbanye na mmepụta uka n'ime obere oge. Enweghị ogologo akụrụngwa, ogologo eriri igwe na-enye nri anaghị adịkarị 5m, ụfọdụ ụdị dịka MFL2 bụ naanị ogologo 2.5m, nke ga-echekwa ebe ọrụ nke ime ụlọ ịtọ. Site na ihe eji agba ahia ahia mba nile, sisitemu akpukpo aru na usoro nyocha nke onwe, komputa nri na –eme ka amam ihe dikwa mfe.
NC leveler feeder machine bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ịtọgasị ụgbọ ala, imepụta ngwa ọrụ, kọmpụta na ngwa elektrọniks, ngwaike na akụkụ igwe wdg. Akụkụ ụgbọala: Braket, Damper, Barke Pad, Tie Bar, ngwa eletriki, shell akụkụ nke ndị na-ebi akwụkwọ, kọmpụta kọmpụta, ụgbọ ala slide nke oche ụgbọ ala, Splash Shield nke ahụ ụgbọ ala wdg.
NC leveler inye nri 3 n'ime 1 Straightener Feeders Onye na-eri ihe na-ebugharị oche Ikpochapu ahiri Feeding na enye nri dika nri Press Press NC Leveler Feede NC Leveler nri NC Leveler Nri